I-Inktober umceli mngeni kubazobi abathanda inki | Izidalwa ezikwi-Intanethi
inktober umceli mngeni kubazobi abathandi beinki abanqwenela kuvavanya izakhono zakho zobugcisa ngendlela eyahlukileyo yokufumana bonisa umsebenzi wakho kumnatha. Umceli mngeni we-inktober ngokungathandabuzekiyo a ithuba elihle lokuzazisa njengabaculi Ngumceli mngeni oye wafumana amandla ukusukela oko waqalwa kwaye unabalandeli abaninzi nangakumbi abathatha inxaxheba kuwo.
Inyanga ka-Okthobha yinyanga yomzekeliso i-inki okanye ubuncinci yile ndlela umyili wayo athe wagqiba ngayo ngo-2009 xa oku inyathelo lobugcisa evela ngenxa yenkuthazo yobuqu. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nolu celomngeni kubo bonke amagcisa abonisa imifanekiso qhubeka ufunda le nto isikhundla.
El reto inktober yavela ngo-2009 njengenxalenye yephulo lokuyila umculi UJake parker ogqibe kwelokuba azicele umngeni kuye phucula izakhono zakho zokubonisa equka yenza umzekeliso yonke imihla ngombandela othile usebenzisa i-inki. Ixesha elingaphezulu umceli mngeni wayefumana amandla kwaye uninzi lwegcisa kwihlabathi liphela laqala ukuthatha inxaxheba ukuphucula nokuphucula izakhono zabo.
Las mithetho kolu celomngeni zilula kakhulu:
Yenza umzobo weinki
Sebenzisa i I-hashtag esemthethweni
Zoba yonke imihla ka Oktobha
Ukuthatha inxaxheba kolu celomngeni lobugcisa kulula kakhulu kuba asixhomekekanga ekuthobeleni le mithetho ngokupheleleyo kodwa ngumbuzo wamanqaku athile asixelelayo ukuba masenze njani kodwa asikhokele kancinane. Akunyanzelekanga ukuba sizobe yonke imihla ukuze sithathe inxaxheba kumceli mngeni kuba eyona nto ibalulekileyo yile ukuphucula izakhono zethu zokubonisa.
Las amazwi alo nyaka Ezi zinto zilandelayo sinokuzibona kolu luhlu:
Sibona ividiyo encinci apho YouTube Isixelela kancinci ngaye Umceli mngeni we-Inktober.
Singadala zonke iintlobo zemizekeliso Ukuqonda ukuba umzekeliso ayingomzobo nje kodwa unokuba ngumfanekiso, ikholaji okanye naluphi na uhlobo lomsebenzi wobugcisa onentsingiselo, le ngongoma eyomeleleyo inktober, kungabikho mda akho ndlela yimbi.
Kumnatha womnatha sinokufumana zonke iintlobo ze amagcisa aphuma kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi abathatha inxaxheba kolu celomngeni bebonisa imisebenzi yabo kwihlabathi ukuba indlela emnandi yokwazisa.
La igcisa / umyili Lelega_yila Sebenzisa i ukufota njengesixhobo kolu celomngeni lokudibanisa imifanekiso yakho kunye inki yedijithali kunye nokuphinda ubambe ifoto ukufezekisa iziphumo ezinomtsalane kunye nezobugcisa.
Ukuba ungumculi awunakuphulukana nethuba lokuthatha inxaxheba kolu celomngeni kunye nokubeka izakhono zakho kuvavanyo lokuyila ngaphandle kwamathandabuzo yindlela entle yokwenza sinyanzele ukuba sisebenze ngokusekwe kwimihla ethile kunye nemixholo ethile, into ekufuneka siyisebenzise njengamagcisa ngoba yile nto siza kuyenza kwilizwe lokwenyani xa siphuhlisa ubuchwephesha.
Uyabona amanye amagcisa athatha inxaxheba kwi- inktober 2017
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Nge-Okthobha umceli mngeni kubazobi abanomdla